Accueil > Gazetin'ny nosy > Rafi-pitsarana manokana : Tsy misy dikany raha manjaka ny kolikoly
Ady hevitra maro no miseho matetika rehefa misy raharaha tokony hatsaraina na asa tokony tanterahina. Matetika ny olona dia misy ny alaim-panahy hanangana rafitra vaovao mba hisahana an’io fanatsarana io na hanatanteraka ny asa tian-kivaingana. Isan’ny teboka isehoan’io fananganana rafitra vaovao manokana io ny fitsarana. Tamin’ny Repoblika faharoa no nisian’ny Fitsarana manokana momba ny ady heloka bevava. Natao hisahana manokana ny tontolon’ny halatr’omby izy io, nefa efa nisy ny Fitsarana misahana ny ady heloka bevava amin’ny ankapobeny. Nisy koa ny Fitsarana manokana ara-toekarena na « Tribunal spécial economique ». Misy anefa ny fitsarana momba ny ady heloka, ho an’izay nanao hosoka ara-toekarena. Nisy ny fitsarana ady madio momba ny raharaham-barotra, fa dia nananganana an’io Fitsarana manokana ara-toekarena io teto.
Taty aoriana dia io iarahantsika mahita io ny Fitsarana manokana miady amin’ny kolikoly na ny
« PAC ». Ny filohampirenena omaly dia nilaza fa « tokony hatsangana ny fitsarana manokana momba ny adin-tany ».
Ady hevitra no sokafana amin’izany rehetra izany satria tsinjo fa mety tsy ho araky ny rafi-pitsarana mijoro amin’izao fotoana loatra ny fisahanana karazan-draharaha iray (adin-tany, ohatra), dia io hoe ananganana rafi-pitsarana manokana io. Mety tsy hoe tsy arany loatra fa ekena ny fahavitsian’ny fitsarana eto nefa ny mponina mitombo. Raha vao mitombo ny mponina dia mazava ho azy fa mitombo ny fifanolanana, mitombo ny heloka, sy ny sisa.
Noho izany, sao tsy ny fanganana Fitsarana manokana loatra no vahaolana fa ny fampitomboana ny fitsarana mijoro sy fanamafisana azy ireny ?
Etsy ankilany, rehefa maro koa ny raharaha sahanin’ny fitsarana iray dia halaim-panahy hanao kolikoly ny tompon-draharaha. Noho izany, vahaolana amin’ny famongorana ny kolikoly izany no tena maika, ary tsy ny raharaham-pitsarana ihany no anaovana izany fa ny fiainam-piaraha-monina ankapobeny mihitsy. Tsy azo hadinoina amin’izany fa atao lohalarana mihitsy ny ady amin’ny kolikoly avo lenta, izay mety mahavoarohirohy « trondro vaventy ».
Raha mahomby ny ady amin’ny kolikoly dia mizotra araka ny rariny ny raharaha rehetra ka tsy hisy hanao fanahy iniana hampitarazoka ny raharaha ary tsy hisy ho sodokan’ny hanolo-bola mba hanafainganana ny azy na hanolo-bola hahazoany rariny na ny andaniny aza no tokony hisitraka ny rariny.